China အပူချိန် flue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်ကိုလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောက်ပံ့သူများ - Zhongshan Gastek Home Appliance Company Limited
ဒီအမျိုးအစားစဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် flue အမျိုးအစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်ချက်ချင်း, အဆုံးမဲ့, On-demand ရေပူထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ မီးလျှံကာကွယ်မှု၊ စက်နှိုးခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း၊ အေးခဲစေသည့်ကာကွယ်မှု၊ အပူကာကွယ်မှုစသည်တို့ဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် flue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်သည်မိသားစုလုံခြုံမှုကိုအာမခံနိုင်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်သောအပူချိန်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံး Turbo မပါပဲဓာတ်ငွေ့သုံးရေပူပေးစက်၊ touch screen display
This type လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် flue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက် can supply instant, endless, on-demand hot water. It’s wall mounted, with compact size, easy for installation. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် flue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက် with flameout protection, Ignition failure protection, anti-freezing protection, over heating protection, etc. can ensure the family safety.
â –³T = 25K 10L 12L 14L 16L
ထုတ်လုပ်မှုအရွယ်အစား 610 * 350 * 188mm 610 * 350 * 188mm 650 * 400 * 188mm 700 * 440 * 200mm
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား 710 * 410 * 245mm 710 * 410 * 245mm 745 * 455 * 250mm 800 * 495 * 260mm
G.Weight ၁၀.၂ ကီလိုဂရမ် 10.5kgs 12.3kgs 14.7kgs
၂။ အပူထိန်းအပူ - ၁ - အပူချိန်ကွာခြားချက်၊ ရေပူ၏ထွက်ပေါက်သည်တည်ငြိမ်ပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးများအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
3. 35â "-65â" အပူချိန်ညှိအကွာအဝေး။
4. 220V သို့မဟုတ် 110V လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
8. အဘယ်သူမျှမတာဘို, လျော့နည်းဆူညံသံ
၁၀.၀၁ 0.01MPa စတင်နိုင်သောရေဖိအား၊ နေအိမ်ဟောင်း၊ ကောင်းမွန်သောအဆောက်အ ဦး စသည်ဖြင့်ကောင်းမွန်သည်။
hot Tags:: စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန် flue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်, လျှပ်စစ်ဓာတ်အား, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်, လက်ကား, စျေးပေါ, လျှော့စျေး, စျေး, အနိမ့်စျေး, လျှော့စျေး, CE, စျေးနှုန်း, နောက်ဆုံးပေါ်, အဆင့်မြင့်